Buugga Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa oo Minneapolis Lagu Daah-furay -
Buugga Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa oo Minneapolis Lagu Daah-furay
MINNEAPOLIS, (Tusmo Times) —Xaflad qiimo badan oo si quruxoon loo soo agaasimay ayaa lagu soo bandhigay buug la magac baxay “Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa” buuggan oo ku saabsan sheekooyin iyo qisooyin Soomaaliyeed oo dhab ah.
Xafladdaas oo ka dhacday goobta shirarka ee Masaajidka Abuubakar As-Saddique ee magaalada Minneapolis, ayaa waxa ka soo qayb galay, culumo, abwaanno, qoraayo, aqoonyahano iyo martisharaf kale oo badan.
Ugu horrayn waxa dadkii goobta isugu yimi soo dhaweeyey aqoonyahan Sheekh C/Rashiid Cabdi oo kamid ah bahdii qaban qaabadda ee munaasabadan lagu soo bandhigay buugga. C/Rashiid ayaa u mahad celiyey dhammaan dadkii kasoo qayb galay barnaamijka kana sheekeeyey taariikh nololeedkii qoraaga buugga Sheekh Maxamed Idris, oo uu ka warramay waxbarashadiisii, waaya aragnimadiisa iyo buuggaagta uu qoray. Wuxuu sheegay in Sheekh Maxamed Idris ummada u soo bandhigay buug dhaxal ma guuraan ah.
Imaamka Masjida Abuubakar As-Saddique Sheekh C/raxmaan Sheekh Cumar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in bandhiga buuggani uu ka duwan yahay kuwa inta baddan looga bartay bulshadda Soomaaliyeed. Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in qoraaga buugga Sheekh Maxamed Idiris uu ahaa suxufi, haddana mushkilaad bulshaddeena ka jira oo aan laga hadlin isagu wax ka qoray, wacyigelin iyo waano wax ku ool ahna ka bixiyo.
Sheekh C/Raxmaan oo hadalkii sii wata ayaa yiri, “Hadalku wuu tagaa, haddii aanan la qorina wuu tagaa”. Sheekh C/Raxmaan ayaa yiri qoyska iyo arrimaha la xiriira waa Fiqi Usri, mowduucanina ma ah mid ay culumadu wax ka qoraan, wuxuuna sheegay in kitaabkan loogu magac daray “Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa” in uu yahay mid muhiim ah.
Abwaan Siciid Saalax Axmed (macallinka soomaaliyeed), oo sidoo kale ah macalin luqadda Soomaaliga ka dhiga Jaamacadda Minnesota ayaa u mahadceliyey qoraaga buugga la daah-furayey ee Sheekh Maxamed Idiris. Abwaan Siciid Saalax ayaa yiri, “Waxaan munaasabadan u nimid dareenka aan u qabno Af-Soomaaliga. Meel kasta oo kitaab la qoray oo waliba Soomaali ku qoran waanu imanaa”.
“Wixii la qoraa quruuma harree, muxuu hadal qiimo leeyahay”, waxaa sidaa yiri abwaan Siciid Saalax oo isagu sheegay in culumadda Soomaaliyeed ay qoreen buuggaagta ugu badan ilaa iyo markii uu burburka Soomaaliya bilowday.
Abwaan Siciid Saalax ayaa ku dhiirigeliyay dadkii joogay daah-furka buugga iyo dhamaan bulshadda Soomaaliyeed in ay gataan buuggaagta la qoro, waliba kuwa afka Soomaaliga lagu daabaco.
Waxaa isna madasha ka hadlay aqoonyahan Eng Cabdi Sulaymaan (Cabdi Dheere) oo sheegay in buuggani yahay mid dhalinyarada wax badan tari doona oo aqoontooda Soomaaliga dhisi doona. Wuxuuna aqoonyahan Eng Cabdi Dheere ku bogaadiyey tacabkan qoraalka ah ee uu muddada dheer isku hawliyey Sheekh Maxamed Idiris. Cabdi Dheere ayaa sheegay in buuggani yahay mid baahi loo qabo, wuxuuna yiri, “Buuggan oo kale waa wax yaabaha loo baahan yahay in la badiyo, waa buug baahi loo qabo, wuuna soo daahay”.
Aqoon yahan Eng Cabdi Sulaymaan (Cabdi Dheere) ayaa yiri, “Sheeku wuxuu taabtay meeshii iyo mowduucii loo baahnaa, waana wixii diinta Islaamka u timid, haddii Soomaaliya xalkeeda la rabo waa in qoyska xooga la saaraa”.
Sheekh Maxamed Idiris oo ah qoraaga buugga“Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa” ayaa isaguna goobtaas hadal kooban oo qiimo badan ka jeediyay. Waxana uu sharraxaad ka bixiyay buuggan uu qoray. Waxa uu sheegay in buuggu uu ka kooban yahay sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oon aan mallo awaal ahayn.
Sheekh Maxamed Idiris ayaa tusaalayaal kasoo qaatay sheekooyinka buugga ku qoran oo ah qisooyin dhab ah oo ku dhacay rag iyo dumarba. Qoraaga ayaa sheegay in dadka ay qisooyinka buugga ku qoran ku dhaceen ay isaga u xog warameen, qalbigoodana ay u fureen.
Qoraa Sheekh Maxamed Idiris ayaa sheegay in marka uu qisooyinka buugga ku qoran qaar kamid ah iyo kuwo kale oo la mid ah uu ku soo qoro bogga uu ku leeyahay barta bulshadda ee Facebook ay dadku ka bix yaan tallooyin iyo falanqayn aad u tiro badan. Haddaba si uu dadka iyo qoysaska Soomaaliyeed ugu faa’iideeyo, wuxuu qoray labo buug oo kala ah “Damac Rag iyo Dan Reer” iyo “Jacaylka Dhabtaa Goormuu Dhashaa”. Sidoo kale Sheekh Maxamed ayaa sheegay in uu hadda gacanta ku hayo qaybtii ama buuggii saddexaad.
Kadib, qaar kamid ah dad weynihii ka soo qayb galay daah-furka buugga ayaa fursad u helay in ay su’aalo weydiiyaan qoraaga buugga Sheekh Maxamed Idiris. Mire Maxamed ayaa Sheekha weydiiyey sida carruurta Soomaaliyeed oo iyagu intooda badan Af-Soomaaliga akhriyin loogu gudbin karaa sheekooyinkan iyo qisooyinkan dhaxal galka ah.
Xaali oo kamid ah haweenkii munaasabadda joogay ayaa iyaduna Sheekha waydiisay astaamaha iyo sidda lagu garto in uu qofku ku jecelyahay?
Sheekh C/Rashiid Cabdi oo xafladda daahfurk soo gabagabeeyey, ayaa sheegay in buuggan uu qoray Sheekh Maxamed Idiris uu noqon doono dhaxal ay adeegsan doonaan dadka afka Soomaaliga ku hadla. Wuxuu Sheekh Maxamed ku ammaanay inuu dadaal ku bixiyey wax anfacaya bulshadda iyo qoysaska Soomaaliyeed.
Haddaba buuggan iyo buuggii ka horeeyay ee uu qoray Sheekh Maxamed Idiris ayaa goobta lagu gadayey. Qoraaga buugga Sheekh Maxamed ayaana buugga u saxeexay dhamaan dadkii nasiibka u yeeshay in ay gacantooda ku dhigaan buuggaagtan qiimaha iyo qaayaha leh.
Related Items:Featured, Somali community, Somali Minneapolis
Xildhibaan Ilhan Cumar oo taagero buuxda siisay Musharax Mohamud Noor